Iincwadi ezi-6 malunga ne-Auschwitz kwisikhumbuzo sokukhululwa kwayo | Uncwadi lwangoku
Iincwadi ezi-6 ezimalunga ne-Auschwitz ngesikhumbuzo sokukhululwa kwayo
Auschwitz sisithethantonye nenye yezona zothusayo eyoyikisayo kwimbali yoluntu. Namhlanje kuphawula entsha isikhumbuzo senkululeko ngowe-1945 yeyona nkampu idume kakubi yamaNazi. Kukho imisebenzi emininzi yeendidi ezahlukeneyo kulo mbandela kwaye oku kuncinci ukhetho lweenoveli, ezinye zisekelwe kwiziganeko zokwenyani, endizizisa kwinkumbulo yaloo mhla.
1 Igosa lethala leencwadi laseAuschwitz-uAntonio Iturbe
2 Usokhemesti waseAuschwitz. Ibali elingachazwanga likaVictor Capesius - uPatricia Posner
3 Inkwenkwe eyalandela uyise ukuya eAuschwitz - uJeremy Dronfield
4 Umculi weTattoo waseAuschwitz-uHeather Morris
5 Umdanisi waseAuschwitz – uEdith Eger
6 Uthando eAuschwitz: Ibali lokwenyani-uFrancesca Paci
Igosa lethala leencwadi laseAuschwitz-uAntonio Iturbe
Kule noveli, umbhali waseBarcelona ubalise ibali elisekelwe kuyo iinyani zokwenyani. Kuyo, kwinqaba ye-31 yenkampu, UFreddy Hirsch uye wavula isikolo sethutyana kunye no ithala leencwadi elithobekileyo nelifihlakeleyo imfihlo ngeencwadi ezisibhozo. abatsha UDita uyazifihla kwaye, kwangaxeshanye, akanikezeli kwaye akaze alahlekelwe ngumnqweno wokuphila okanye wokufunda.
Usokhemesti waseAuschwitz. Ibali elingachazwanga likaVictor Capesius - uPatricia Posner
Umbhali usixelela ngebali lika UVictor Capesius, omnye wababulali abakhohlakeleyo kunye nabantu abangabaziyo abavela kwiThird Reich, ababegada indawo yokugcina amaNazi Zyklon B igesi kwaye inike oogqirha berejimeni ngamachiza okulinga abafazi abakhulelweyo kunye nabantwana. UPosner uqala axoxe ngexesha lakhe njengomthengisi kwishishini lamayeza, ukulandela kwakhe ubuNazi, ukunyuka kwakhe koloyiko kwezo nkampu zoxinaniso, kunye nokuba kwakunzima kangakanani ukumzisa ematyaleni.
Inkwenkwe eyalandela uyise ukuya eAuschwitz - uJeremy Dronfield
UDronfield ngumbhali webhayoloji, umbhali, unoveli kunye nombhali-mbali onamava abanzi okubalisa amabali asekwe kwiMfazwe yesibini yeHlabathi kunye nesitayile esithathelwe ingqalelo phantse "iDickensian". Le noveli isekelwe kwi imfihlo idayari ye Gustav Kleinman, owathi, kunye nonyana wakhe uFritz, baxhathisa iminyaka emithandathu kwiinkampu zokubulawa kwabantu ezintlanu ezimbi, kuquka iAuschwitz.
Umculi weTattoo waseAuschwitz-uHeather Morris
UMorris wazalelwa eNew Zealand kwaye kule noveli isekelwe ibali lokwenyani likaLale noGita Sokolov, amaYuda amabini aseSlovak akwaziyo ukusinda ekuBulaweni Kwabantu Ngenkohlakalo. ULale usebenza njengomzobi womvambo wamabanjwa kwaye phakathi kwawo kukho uGita, ibhinqa eliselula athandana nalo. Emva koko ubomi bakhe buya kuthatha intsingiselo entsha kwaye uya kuzama ukwenza konke okusemandleni ukuze uGita kunye namanye amabanjwa aphile. Emva kwemfazwe, bagqiba kwelokuba bafudukele eOstreliya ukuze baqale phantsi.
Umdanisi waseAuschwitz UEdith Eger
Wazalelwa eHungary, uEger wayengum selula xa amaNazi ahlasela ilali yakhe eHungary aza amgxothela eAuschwitz nentsapho yakhe yonke. Abazali bakhe bathunyelwa ngqo kwigumbi legesi kwaye wahlala nodade wabo, elindele ukufa okuthile. Kodwa nini ibheyile IDanube eluhlaza kuGqr. Mengele wabusindisa ubomi bakhe waza, ukususela ngoko, waqalisa ukulwela ukusinda awathi ekugqibeleni wakufumana. Emva koko wangena Tshikoslovakiya ubukomanisi kwaye yaphela ngo EUnited States, apho wayeza kuphelela ekubeni ngumfundi kaViktor Frankl. Kungelo xesha ke, emva kwamashumi eminyaka efihla ubomi bakhe obudluleyo, awathi wagqiba kwelokuba athethe ngoloyiko awayenalo aze axolele njengendlela yokupholisa amanxeba.
Uthando eAuschwitz: Ibali lokwenyani-uFrancesca Paci
Intatheli uFrancesca Paci uphinde wakha kwakhona a eyinyani ilityalwe ngemithombo ethatyathwe koovimba baseAuschwitz State Museum, amaxwebhu exesha kunye neencoko namangqina ambalwa oku. ibali lothando abasaphilayo. ziyinkwenkwezi Zimetbaum embi, ibhinqa eliselula elinenkcubeko nelinomdla, owayethetha iilwimi ezininzi kwaye wakhethwa yi-SS njenge itoliki kunye nomguquleli. Enesisa, wayesoloko ezama ukunceda amanye amabanjwa. Y Edek, uEdward Galinski, owayeyindoda engaqhelekanga kuba wayenjalo omnye wabagxothwa bokuqala kwinkampu yaseAuschwitz-Birkenau. Wayibona indlela eyaqala yaza yakhula ngayo loo ntshabalalo, kodwa akazange adimazeke okanye aphelelwe lithemba. Kwakungelo xesha ngowe-1944 xa, nangona uLawulo Lwesithathu lwalusele luza koyiswa emfazweni, awathi uEdek noMala bathandana baza bajamelana nekamva labo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » Iincwadi ezi-6 ezimalunga ne-Auschwitz ngesikhumbuzo sokukhululwa kwayo
UMónica Rodríguez noPedro Ramos, Ibhaso le-EDEBÉ kuncwadi lwabantwana nolutsha
UPercy Jackson: Iincwadi